Al-shabaab oo gabar dhagax ku dilay | Baydhabo Online
Maraykanka oo 18 Al Shabaab ah ku dilay duqeyn Dr...
Maraykanka oo 18 Al Shabaab ah ku dilay duqeyn Drone
Taliye ka tirsan Heyadda Nabad Sugida Qaranka oo xabsiga loo taxaabay
Ra’iisul Wasaare Khayre oo qaabilay Safiirka Djibouti ee Soomaaliya
Dhismaha Charts ka - Triangle - Episode 1
Dhismaha Charts ka - Cup and Handle - Koob iyo Dhagtiis - Episode 3
Al-shabaab oo gabar dhagax ku dilay
Ururka Al-Shabab ayaa haweenay ku dilay magaalada Saakow ee Gobolka Jubbada Dhexe kadib markii ay ku eedeeyeen inay ku kacday fal sino ah. Al-Shabab ayaa ku eedeeyey in haweenaydan ay laba guur gashay.
Warar ay heshay idaacadda VOA waxay sheegayaan in haweenaydaas ay ka tagtay nin hore u qabay kadib markii ay taageero ka weyday kadibna ay waalidkeed ka dalbatay in laga furo taasi oo ay sameeyeen.
Warar kale ayaa sheegaya in ninka hore uu ka adkaystay furitaanka balse waalidiinta oo adeegsanaya culimo ay ka fureen. Waxaan si madaxbannaan loo xaqiijin in haweenaydaasi ay laba nin isku mar guursatay. Waxaa kale oo aan la xaqiijin in haweenaydan ay qiratay arrintaasi maadaama maxkamadaha Al-Shabab aysan ahayn kuwa dadweynaha u furan.
Al-Shabab ayaa magaca haweenayda ku sheegay Xabiiba Cali Isxaaq, waxaana la sheegay inay da’deedu tahay 30 sano jir. Xabiiba Cali Isxaaq ayaa noqonaysa qofkii labaad ee sannadkan gudihiisa ay Al-Shabab ku dilaan dhagax.
Bishii May ee sannadkan ayaa degaanka Raama Caddey Al-Shabab waxay sidaasi oo kale dhagax ku dileen nin lagu magacaabo Dhaayow Maxamed Xasan oo lagu eedeeyey inuu sino gaystay taasi oo aan sidaasi oo kale loo xaqiijin si madaxbannaan.
Culimada Soomaalida ayaa dhalleeceeyey dilkan ugu dambeeyey ee ay Al-Shabab gaysatay.
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ayaa sheegay in eedaha Al-Shabab ee ah inay
haweenaydaasi qiratay ay yihiin kuwo aan sal lahayn. Waxa uu sheegay in qofka ku nool cabsi iyo argagax aan la aqbali karin qirashadiisa.
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ayaa intaasi ku daray in Al-Shabab ay yihiin urur aan sharci ahayn sidaasi oo kalena garsoorka ay fuliyaan uu noqonayo mid aan sharci ahayn.
Sheekha ayaa Haaruun Macruuf Khadka Telefoonka ugu warramay
Faaqidaadda: Xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada